Tantara: Abigaila sy Davida - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
Taorian’ny nandosiran’i Davida an’i Saoly, dia niaﬁna tao amin’ny zohy iray izy. Ireo rahalahiny sy ny sisa tamin’ny ﬁanakaviany dia nanatona azy tao. Lehilahy teo amin’ny 400 no tonga teo aminy tamin’ny ﬁtambarany, ary lasa ﬁlohan’izy ireo i Davida. Nankany amin’ny mpanjakan’i Moaba i Davida avy eo ary niteny hoe: ‘Aoka re ny raiko sy ny reniko mba hitoetra eto aminao ambara-pahitako izay hitranga amiko.’ Tatỳ aoriana, i Davida sy ny olony dia nanomboka niaﬁna tany amin’ireo havoana.
Taorian’izany no hihaonan’i Davida tamin’i Abigaila. Nabala vadiny dia lehilahy nanan-tany be. Nanana ondry 3 000 sy osy 1 000 izy. Lehilahy kahihitra i Nabala. I Abigaila vadiny anefa dia vehivavy tena tsara tarehy. Fantany koa ny fomba fanaovana izay mahitsy. Indray mandeha dia voavonjiny mihitsy aza ny ﬁanakaviany. Aoka hojerentsika hoe tamin’ny fomba ahoana.
Nampiseho hatsaram-panahy tamin’i Nabala i Davida sy ny olony. Nanampy azy izy ireo tamin’ny ﬁarovana ny ondriny. Indray andro àry i Davida dia naniraka sasany tamin’ny olony mba hangata-javatra tamin’i Nabala. Tonga teo amin’i Nabala ireo olon’i Davida raha mbola teo am-panetezana ny ondriny izy sy ireo mpanampy azy. Andro fety tamin’izay, ary nanan-javatra tsara maro hohanina i Nabala. Koa izao no nambaran’ireo olon’i Davida: ‘Nampiseho hatsaram-panahy taminao izahay. Tsy naka na dia iray aza tamin’ny ondrinao izahay, fa nanampy teo amin’ny ﬁandrasana azy ireny. Mba omeo hanina re izahay, ankehitriny.’
Tokony hifanohana ny mpirahalahy kristianina. Inona no ohatra tsara navelan’ny ﬁanakavian’i Davida momba izany? (Ohab. 17:17; 1 Tes. 5:14)